KTO(Kachin Today Online Blog USA) is non profit, non commercial, any Kachin can involved,Being build by group of volunteer.
Awng padang dip ai Video
Posted by Admin Wednesday, December 28, 20110comments
64th ANNIVERSARY OF KACHIN STATE DAY
Posted by Admin Tuesday, December 27, 20110comments
KACHIN STATE DAY EVENT INVITATION
Kachin Relief Fund Fair in Omaha, Nebraska
Posted by Admin Sunday, December 25, 20110comments
Hpyen Yen Tsinyam ni hpe garum na hte Amyu sha lam shamu shamawt ai lamang hpe 2011ning December 17 ya shani Omaha Jinghpaw Wunpawng Amyu sha ni kaw nna awng dang aihte galaw la lu sai lam chye lu ai, matut nna Amyu Sharawt Fund Tam Komiti(Omaha) hte FirstKachin Baptist Church of America(FKBCA) kaw na woi awn galaw ai re lam hpe mung chye luai. Ndai zup hpawng hta Myen Mungdan na kaga amyu bawsang ni hte seng ang ai Asuya Rungna salang ni, NGO/INGO salang ni, Makam masham hpung na ningbaw ni yawng marai(500) janshang lawm lai wa sai lam hpe mung chye lu ga ai, du sa ai manam kaba ni kaw na OmahaMayor
Jim Suttle mung shang lawm n-gun jaw sai lam chye lu ai.Malu masha dut lu ai hte garum jaw ai shang gumhpraw yawng $ 9,364.29 lu hkap la airai nna, ngam ai ja gumhpraw ni hpe kanu mungdan seng ang ai ni de matut mahkai ap yamat wa na re lam hpe zuphpawng ningbaw langai rai nga ai Htingnan Munggyit kaw nashana wa ai hte maren chye lu ai
Omaha Kachin Relief Fund
NLD kawn Kachin Refugee ni hpe karum
Posted by Admin Saturday, December 24, 20110comments
ကခငျြ ဒုက်ခသညျတှေ အတှကျ ဒျေါစု ငှလှေု
ကခငျြ ပွညျနယျမှာ စဈပွေး ဒုက်ခသညျ ငါးသောငျး ကြျောထိ ရှိနလေို့ လူ့အခှငျ့ အရေး အဖှဲ့ ခနျ့မှနျး
အမြိုးသား ဒီမို ကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ ခေါငျး ဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျး စုကွညျက ကခငျြ ပွညျနယျမှာ ရှိတဲ့ စဈပွေး ဒုက်ခသညျတှေ အတှကျ ငှကေပျြ သိနျးသုံးရာ လှူဒါနျးခဲ့ ပါတယျ။
ကခငျြပွညျနယျကNLD အဖှဲ့ခြုပျဝငျ ဦးဖစေိနျနဲ့ အဖှဲ့က မနကေ့ စပွီး မွဈကွီးနားနဲ့ ဝိုငျမျောဒေ သတှကေို သှားရောကျ လှူဒါနျးခဲ့ပွီး ဗနျးမျော မှာ ရှိတဲ့ ဒုက်ခသညျ စ ခနျးတှေ မှာလဲ ဆကျပွီး လှူဖို့ သှားရောကျ နပေါတယျ။( Read more++++)
San Francisco Kachin Community held an Awareness and Fund Raising Event
Posted by Admin Thursday, December 22, 20110comments
Kachin Community in San Francisco Bay Area held an Awareness and Fund Raising Event for the Kachin Refugees on Dec 17, 2011 from 1pm to 5pm. The event was aimed to raise awareness for Kachin struggles and support Kachin IDPs living under perilous conditions. The event was…
December 21, 2011 / No Comment / Read More
Posted by Admin Tuesday, December 20, 20110comments
တရုတ်နိုင်ငံမှ အခွန် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကောက်ခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ကျောက်စိမ်း ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ကျော် ကျဆင်း
Posted by Dove on ဒီဇင်ဘာ 21, 2011 at 1:00pm
သတင်းပို့မယ် View Blog
တရုတ်နိုင်ငံမှ အခွန် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကောက်ခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ န...
Wednesday, 21 December 2011 10:19
နေပြည်တော်၌ပြုလုပ်ခဲ့သော ကျောက်စိမ်းအရောင်းပြပွဲတစ်ခုတွင် ပြသထားသည့် ကျောက်စိမ်းတုံးများကို တွေ့ရစဉ်
နှစ်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံ ပို့ကုန်ကဏ္ဍတွင် ဒုတိယတင်ပို့မှု အမြင့်ဆုံးဖြစ် သည့်ကျောက်စိမ်းတင်ပို့မှုမှာ ယခု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျဆင်းသွားခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ကျောက်စိမ်းများအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံမှ ယခင်နှစ်များက အခွန်ကောက်ခံမှုမပြုခဲ့ဘဲ ယခုနှစ်တွင်တင်ပို့သမျှ ကျောက်စိမ်းများအားလုံးကို အခွန်နှုန်း ၃၃ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ တင်ပို့မှု ကျဆင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အခွန်တိုးကောက်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောက်စိမ်းများအား ယခင်ကကဲ့သို့ ၀ယ်ယူနိုင်စွမ်း မရှိတော့ကြောင်း၊ ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ကျောက်စိမ်းအချောထည်များအဖြစ် ပြုလုပ်တင်ပို့သည့်ဘက်သို့ ဦးတည်နေရကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ''ကျောက်စိမ်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ၃၃ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ကောက်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကျောက်စိမ်းကို ကုန်ချောလုပ်ပြီး One Stop Services နဲ့ ပို့ဖို့လုပ်ပါတယ်''ဟု ဒီ ဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့်တွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
''၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့ အခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့ ကာလတူကို နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်မှာ မနှစ်ကထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ကျော်လောက် လျော့ကျနေပါပြီ။ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဖို့ကလည်း သုံးလလောက်ပဲ ကျန်တော့တဲ့အတွက် မနှစ်ကပမာဏမျိုး မီဖို့ကတော့ ခက်သွားပြီလို့ ပြောရမှာပါ''ဟု စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
''ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပို့ကုန်ကဏ္ဍမှာတော့ ဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ကျောက်စိမ်းက ဒုတိယ အများဆုံးပို့တဲ့ ပို့ကုန်ပါ။ ဒီနှစ်မှာတော့ သတ္တုတွင်းထွက်ကဏ္ဍက လက်ရှိအချိန်မှာ ဒုတိယအများဆုံး ပို့တဲ့ပို့ကုန် ဖြစ်နေတယ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နံပါတ်တစ်ပါ။ လက်ရှိမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလျံလောက်တော့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့မှုက ရရှိထားပါတယ်။ကျောက်စိမ်းတင်ပို့မှု အတွက် ကတော့ ကျွန် တော်တို့ဆီမှာ Form-D တို့ Form-E တို့ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ ပို့တဲ့အခါ အခွန်သက်သာခွင့် ရလေ့ရှိတယ်။ အခု အဲဒါနဲ့ ပို့ကြည့်မယ်။ ပို့ကြည့် တဲ့အခါ တရုတ်နိုင်ငံက အခွန်သက်သာခွင့် မပေးဘူးဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံအစည်းအဝေးတွေမှာ အရင်တုန်းက MoU ထိုးထားတဲ့အကြောင်း သက်သာခွင့်ပြုဖို့အကြောင်း ညှိနှိုင်းသွားဖို့တော့ စီစဉ်ထားပါတယ်''ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့သည်။
နှစ်အလိုက် ကျောက်စိမ်းတင်ပို့မှုပမာဏ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ သန်း)
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၃၅၅ .၅၈
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၆၂၁ .၂၃
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၆၅၇ .၅၉
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၉၆၄ .၈၂
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ကို တဦးတည်းကူညီမည့် ဂျော့ဆိုရော့စ် မြန်မာပြည်လာမည်
Posted by Zan Zan on ဒီဇင်ဘာ 21, 2011
ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ လေ့လာရန် ဒါရိုက်တာ လူရွှင်တော် ဦးဇာဂနာဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ၁၆-၁၂-၂၀၁၁ ရက်တွင် လေ့လာရေး ခရီးစတင်ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါလေ့လာရေးခရီးတွင် ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်၍ ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုများ ရုပ်သံသတင်းဌာနများအား လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"အဓိကကတော့ လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော် အတွက်သွားတာပါ။ ဒီလိုသွားရင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္တုပ္ပတ္တိရိုက်ကူးရန် အတွက်ပါ ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ လေ့လာသွားမှာပါ။ ကမ္ဘောဒီးယားမှာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုတာ သင်တန်းပို့ချတဲ့ Metal Film School ရှိတယ်၊ အဲဒီကို သွားလေ့လာမယ်။ မြန်မာပြည်ကိုလာဖို့လဲ ဖိတ်ခေါ်မယ်" ဟု ဦးဇာဂနာက ပြောသည်။
ထို့ပြင် ရုပ်ရှင်သင်တန်းပို့ချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိက၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီရှိ ပညာရှင်များမှာ ဒီဇင်ဘာလကုန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်၍ အကဲဖြတ်ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်မည့် လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်အား ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆုရရှိသူများအား New York Film Institute တွင် သုံးလကြာ ရုပ်ရှင်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္တုပ္ပတ္တိဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးရန် ပြည်တွင်းရှိ အကြီးအကဲများနှင့် အတ္တုပ္ပတ္တိဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးရန် ပြည်တွင်းရှိ အကြီးအကဲများနှင့် အနုပညာရှင်များ၏ ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုများ အပါအဝင် ပြည်ပနိုင်ငံရှိ ဟန်ဂေရီဖွား ဂျူးလူမျိုးအမေရိကန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သူကြွယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂျော့ဆိုရော့စ်က ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်လမ်းအတွက် တစ်ဦးတည်း ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် မှာ ဖော်ပြထားသည်။
USA kaw galaw ai lamang nkau mi
Posted by Admin Monday, December 19, 20110comments
You are Codially invited to participate and support our fundraising event for Kachin refugees://
Come and join us to support Kachin Freedom Struggle. We will be having Multi-Ethnics Burmese Cultural Evening to raise fund for Kachin refugees and IDPs who are the victims of the ongoing conflict between KIA and Burmese government army. The fundraising event will be on Dec 17, 2011 at Crown Point Baptist Church, 10153 Old St. Augustine Road, Jacksonville, FL 32246. Food, dance, music and much more... For more info contact Dan at 904-654-5550
HPYEN YEN TSIN YAM NI A MATU USA DU HKANG MYU SHA NI GARUM
December (20) bat Lahkawng,
Dec 17, 18 2011; America mungdan, New York mungdaw, Buffalo mare kaba kaw shanu nga ai hpu nau Hkang hpung masha ni hte Jinghpaw wunpawng myu sha ni hku nna, Jinghpaw Mung hpyen yen tsin-yam niamatu shalai ya ai garum gumhpraw (US$ 3,962) hpe hkap la ai lamang galaw wa sai lam na chye lu ai. Buffalo Chin Emanuel Church, Matu Christian Fellowship niasaw shaga ai hte maren, Slg. Hpauda Tu hte Slg. Tangbau kam Li yan hku nna, Buffalo mare kaba de sa du let, nawku hpung masha ni hte hkrum zup nhtawm, ya ten na Jinghpaw Mung hpyen yen tsin-yam niamayak manghkang lam ni, Myen hpyen waamyu shamyit masing lam ni hpe tsun sang lang dan mat sai. Nawku hpung masha ni hku nna, tsin-yam niamayak manghkang ni hpe na myit yawn let, aten galu garum mat wa na masing ni hpe jawm bawngban jahkrup galaw sa wa na re lam hpe mung na chye lu ai.
By: USA Kachin/JinghpawKasa
AMYU MAT SANA KUN?
Posted by Admin Thursday, December 15, 20110comments
Ka ai -Dr KhaLum
Democracy lu yang masha law ai amyu ni gaw masha n law ai amyu ni hpe ra lata n-gun (majority vote) hte dang sha kau na kun? nga nna nkau mi myit tsang ma ai. Nga kaba gaw nga kaji hpe sha, amyu kaba ni gaw amyu kaji ni hpe sha nga ai. Ndai mugkan ntsaelamu aga mayu nna amyu n mat, masha shada mayu nna amyu mat ai nga hkrit tsang ma ai. Teng ai. America mung htaeRed Indian ni hpe Uropa na shan hpraw (Europeans) ni sat shamyit kau ai majaw Red Indian amyu tsawm ra htum mat sai. Myen mungdan hta moi na grai hkik hkam sai (civilized societies) Pyu, Thet, Kann-yan amyu masha ni ya mat wa magang sai. Kadu amu masha ni gaw shanhte amyu hpe shanhte SAK amyu ngu shamying ma ai. Dai gaw ASAK ngu ai rai nna Myen ga hku Ah-Thet (asak) shing n rai Thet ngu ai lachyum pru ai. Moi na Thet amyu angaw angam rai nga ai. Wunpawng sha ni moi Majoi Shingra Mongolia kaw nna Miwa mung (China) maga de htawt sa wa yang Miwa du hkawhkam ni hpe n dang ai mjaw Miwa mung(China) hte Kala mung (India) lapran de du wa ai lam labau hta sagawn la lu ai.
Ya bai amyu kaba ni alapraneKachin State ngu nna majoi hpawng de nga yang myit ru myit tsang lam ni bai pru sai. Ndai Kachin State kade na hkra grin nga nna Jinghpw Wunpawng sha ni kade na hkra hkam jan lu na kun? ngu ai ga san gaw myit yu chye ai Wunpawng sha shaguabaw hta rawng ai ga san rai nga ai.
Wunpawng sha ni nawku kam sham ai KaraiaMungga hte maren nga yang, Wunpawng sha ni hpe Karai Wa lata la sai majaw amyu n mat na re. Masha law ai ni she galoi mung up sha lu na nga yang Miwa hte Kala gaw mungkan ntsaemasha law dik re ai majaw, mungkan hpe up sha kau sana re. Mungkan labau hpe yu yang, masha n law ai British amyu masha ni Miwa mung hte Kala mung(India) hpe up sha laiwa masai. Mungkan ting hpe tinang hkrai up sha na matu amyu law law shakut lai wa yu masai. Babylon, Syria, Assyria, Egypt, Persia, Greek, Roma(Rome), France, Germany(Hitler), Italy(Mossoulini), Japan, Communist Russia, Communist Miwa, Moslem(Osama Ben Laden hte Sadam Hussein) ni yaw shada lam kaba hte mungkan ting hpe up sha na matu laja lana shakut masai. Mungkan chyen mi hpe gaw lu up lai wa masai. Dai ni mung EU hte kaga Asian mungdan ni dai hte maren shakut nga ma ai. Dai ni mungkan hpe up na ahkang USA hpe Karai Kasanag jaw ai myi hte chyaw mu lu ai. Hpa majaw ta? England mungdan na hkaw hkam ni coronation hkaw hkam aya dang ai shaloi Chyoi pra ai Karai KasangaChyum laika buk hpe magra jum nna dagam ma ai. USA mungdan hpe mungdaw 13 hte nna gawesa wa yang Chyoi pra ai Chyum liaka hta npawt nhpang tawn nna shanhteadollar gumhpraw ni hta In God We Trust ngu ka shakap m ai. USA gumsan magam ni aya hkap la ai shaloi Chyoi pra ai Chyum laika hpe magra jum nna dagam ma ai. Karai Kasang gaw "Ngai hpe shagrau ai wa hpe Ngai shagrau na we ai Ngai hpe dagam ai wa hpe Ngai dagam kau na nngai" nga nna tsun da ai re. AD 1014ning hkan Myen mung daneAnawrahta hkaw hkam up nna grai hkik hkam lai wa sai. Dai ten hta America hpe mu tam ai Columbusakaji dwi, kaji ke ni pyi garai n shangai ma ai. Dai ni America mungdan asak 200 ning jan(1784-2005) naw rai na ai. Gara mahtang grau ngaata? Myen mung dan gaw Karai Kasangasasana hpe pat shingdang nga ai. Nawku hpawng ni, mung shawa hpawng ni hpe pat hkum nga ai. Nawku htingnu ni n mai gap ai, n mai gram ai. Marai mangai hta jan nna nta hkan n mai hapawng de ai. Nawku htingnu n re ai kaw nawku htingnu zawn n mai jai lang ai ga nna pat nga ai. Laban shani shawa amu galaw n sa n mai tara jahkrat ai n rai i? Dai hku aming jahkrat ai myitsu ni gaw moi shawng de sasana jawng hkan hpaji sharin nna chye chyang kunghpan mat wa aini n rai i? Dai rai nna mungkan hta matsan dik ai mungdan ni hta lawm nga sai n rai ni? Mungkan hta myi man n lu dik n rai ni? Mung shawa masha ni madai nga ai n rai ni? Mung masha ni gara de hprawng shingbyi nga ma ni? Karai Kasangashaman chyeju gaw kadai ni hkam sha nga ma ni?
Israel masha ni hpe yu ga. Mungdan kaji ai. Masha n law ai. Kadai wa Israel ni hpe kam ai mi di lu ma ni? Makau grup yineArab hpyen ni hti n dang hkra law nga ai n rai ni? Kru ya majan hta gara maga de karai Kasang lawm ngaani? Karai Kasang lata la ai masha hpe hkra ai wa gaw Karai Kasangasinggan myi sha (pupils of God's eyes) hpe hkra ai wa rai nga na, Karai Kasang matai htang na nga ai ga sadi nga ai n rai ni? Abraham hpe Karai Kasaang shaga la ai shaloi"Nang hpe shaman ai wa hpe Ngai shaman na nngai, Nang hpe dagam ai wa hpe Ngai dagam kau na nngai" nga nna tsun ai ga gaw dai ni du hkra teng nga ai n rai ni?
Karai Kasang hpe n chye ai amyu ni mungkan labaau hta grai hkik hkam lai wa masai. Miwa hkawhkam ni deng 1500 galu ai mau hpa wut shakum bunghku (The Great Wall) hpe mung shawa masha n-gun katsing (luuk-aah) hte hkrai woi galaw ma ai. Mongol Tartar hpyen ni hpe shingdang na matu yaw shada nna galaw ai re. Masha wan wan sen sen si sai. Hpa akyu pruata? Bunghku sin ai ni hpe mayun kumhpa jaw nna masum lang tup Miwa mng hpe shang gasat kau ma ai. Babylon hkawhkam wa maigan hkawhkam shayi hpe hkung-ran la yang bum lang shagawng hpe marit ai nga ai majaw Tigris-Euphrates hka kau mayanemung masha n -gun hte lamu dep nampan sun naura bum woi galaw sai. Mau hpa kaba langai mi rai nga ai. Mung masha asak grai sum sai. Kadai hpe akyu n jaw ai. Egutu Pharaoh ni mung masah n-gun hpe ja lang nna Nile hka nuasinna maga de Pyramid ni woi galaw ma ai. Mung masha grai si ai. Mauhpa pyramid ni dai ni du hkra nga nga ma ai. Kadai hpe akyu n jaw ai. India mungdan na Maharajah langai shiatsawm dik madu jan grai naw mahkawn ai si mat ai majaw myit n wai nna Taj Mahar lup htingnu galaw nna lup da ai. Shiamungdan na hkik dik laksama ni hpe galaw shangun ai. Gumhpraw grai ma ai. Dai ni na manu hte pyi dollar wan kaba dan nga ai. Mungkan hta mauhpa kaba langai mi rai nga ai. Kadai hpe akyu n jaw ai. Dai lup htingnu galaw ai laksama ni dai zawn re ai htingnu bai n gaw gap lu na matu shantealata hpe daw kau ya ai hkrum sai. Dai hte maren kaga seven wonders of the world hpe myit yu yang chye ram sai.
Dai ni mungkan masha ni hpe akyu jaw ai mawdaw, wan leng, myithprap wan, nbung li, computer, jak arung arai, tsi mawan amyu myu hte, volleyball, bsketball, bawlung soccer,ginsup hpan amyu myu, Red Cross, Wan sat dap,YMCA, UN mungkan Wnpawng hpung, zawn re ai ni yawng ngu na daram karai Kasang hpe hkrit hkungga ai masha ni hpe Karai Kasang hpaji byeng-ya bang ya nna gyin shalat shapraw da ma ai. Ndai gyin shalat ninghkrin (inventors) nkau mi hpa dakkasu pyi n lung yu ma ai. Kadai wa hpe karai Kasang jai lang ngaata?
Wunpawng sha ni n law tim Karai Kasang lata la sai amyueai majw Karai Kasang n kabai da na re. Wunpawng sha ni hpe hkra ai wa gaw Karai Kasangaashainggan myi sha (pupils of God's eyes) hpe hkra ai wa rai nga ai. Moi Nineveh mare hpe de nna Israel masha ni hpe dip sha lai mat wa saai Asyria (Asuri) mungdan ya kanang rai ta? Ya hkam sha ai ruyak gaw Wunpawng sha ni hpe Karai Kasang wunkat jaw nga ai rai nga ai. Egypt (Egutu) mung hta Israel amyu masha ni 430 ning hkam sha ai hpe myit yu ga. Wunpawng sha ni n law ai majaw num mali hpra la yang masha gaw htam mali kalang ta jat wa na re. Rai tim karai kasang n lawm yang kashu kasha l tim kaman li la sha lu kau nna terrorists sa jat wa na re. Karai kasang hte rau rai yang masha n law tim masha law ai ni hpe lam woi na re. Ngam nga ai kangka masha the faithful remnant hpe jai lang nna amu kaba galaw ai Hpan Karai Yehowa gaw Wunpawng sha ni hpe jai lang akyu jashawn u ga. Wunpawng sha ni hta na PhD hpaji ninghkrin hte inventors gyin shalat ninghkrin law law pru wa ga law. Madu Yehowa htani htana agrin agrau nga ai hte maren Wunpawng sha ni hte Wunpawng mungdan tut nawngea grin agrau nga u ga law
Kachin IDP Jeyang camp
Posted by Admin Wednesday, December 14, 20110comments
front line in KIA soldiers
kachin refugee children(photo eassy)
kachin refugees children in jeyang idp camp
kachin refugees in jeyang IDP camp
Hkau nbwi sam chye ju kaba sai yaw
အရပ်သားအစိုးရ နဲ့ စစ်တပ်သြဇာအာဏာ
ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာ သုံးသပ်ချက်အစီအစဉ် ဦးကျော်ဇံသာ က သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ စစ်တပ်ကို ညွှန်ကြားခဲ့ပေမယ့် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးနေဆဲပါ။ ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း အရပ်သားအစိုးရအနေနဲ့ စစ်တပ်အပေါ်မှာ သြဇာရှိပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းများရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အရပ်သားအစိုးရ နဲ့ စစ်တပ်ကြား ဆက်ဆံရေးအခြေအနေအပေါ် စစ်ရေးအကဲခတ် ဦးဌေးအောင်၊ တရုတ်-မြန်မာအရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဦးအောင်ကျော်ဇော တို့နဲ့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ လအတော်လေးကြာခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာကလည်း ဒီစစ်ပွဲတွေကို ရပ်ဆဲဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း ရပ်ဆဲဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် က အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲဖို့ ပြောလိုက်တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးနေသေးတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒါက သမ္မတရဲ့  ညွှန်ကြားချက်ကို စစ်တပ်က မလိုက်နာတာလား။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ သမ္မတတယောက်လုံးက ဒီလိုပြောတာကို စစ်တပ်က ဘာကြောင့်ဆက်လက် တိုက်နေသလဲဆိုတာကို ပထမဦးဆုံး ဦးဌေးအောင်ရဲ့  သဘောထားကို ကြားသိလိုပါတယ်။
ဦးဌေးအောင် ။ ။ ကျနော်မြင်တာကတော့ သမ္မတကိုယ်တိုင်က ညွှန်ကြားတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတခုမှာ အမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့ သူက ညွှန်ကြားတယ်ဆိုရင် တပ်မတော်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ ဒီလိုအမိန့်ကို လိုက်နာရမယ်။ မလိုက်နာဘူးဆိုရင် အရေးယူလို့ရတယ်။ အဲဒီတော့ အခုအချိန်မှာ ဒီညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာဘူးဆိုတာကတော့ ဒီ ညွှန်ကြားချက်က အစစ်အမှန် ညွှန်ကြားတာလား။ ဒါမှမဟုတ်လို့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့  ဖိအားတွေကို ရှောင်ဖို့ တမင်လုပ်ကြံတာလား။ ဒါကို ကျနော်တို့ ပြန်ပြီး စမ်းစစ်ဖို့လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီတော့ ညွှန်ကြားရာမှာ အစစ်အမှန်ညွှန်ကြားတယ်။ ‘မင်းတို့ ငါက ညွှန်ကြားလိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်တိုက်နေကွာ။’ လူကြားကောင်းအောင် ညွှန်ကြားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလုပ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။ တကယ်တော့ နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးပေး၊ ဘာပေးပေး ညွှန်ကြားတယ်ဆိုရင် ရပ်ဆဲရမှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။
ဦးဌေးအောင် ။ ။ တခုရှိပါတယ်။ စစ်တပ်က ညွှန်ကြားတာမျိုးဆိုရင် အခုလိုမျိုး အရပ်ဖက်ကို ဒီညွှန်ကြားမှုကြီးတခုလုံးကို ထုတ်ပြီးတော့ ဖော်ပြတာမျိုးဆိုတာ အစဉ်အလာအရ မရှိပါဘူး။ နောက်တခုက သမ္မတအနေနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ညွှန်ကြားရမယ်ဆိုရင် အခု ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရဆိုရင် ကာလုံလို့ခေါ်တဲ့ ကော်မတီကတဆင့် ညွှန်ကြားရမယ့်သဘောလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခု ညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံက တပ်မတော်မှာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ နောက်တခုက ပြည်သူလူထုကိုလည်း အခုလို ချပြတာမျိုးက ထူးခြားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကာလုံဆိုတာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး နဲ့ လုံခြံရေးကော်မတီလား။
ဦးဌေးအောင် ။ ။ ဟုတ်ပါတတ်ခင်များ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ အဲဒီအဖွဲ့ထဲမှာ သမ္မတက အကြီးအကဲအနေနဲ့ မပါဝင်ဘူးလား။
ဦးဌေးအောင် ။ ။ ပါပါတယ်ခင်များ။ ဒါပေမဲ့ အခုနလိုမျိုး ကာလုံမှာက တိုက်ရိုက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ ပါထားပြီသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလို စာတတန်ပေတတန်နဲ့ ညွှန်ကြားစရာမလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးအောင်ကျော်ဇော သဘောထားက ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဦးအောင်ကျော်ဇော ။ ။ ကျနော်နဲ့ ကိုဌေးအောင် သဘောထား တူပါတယ်။ ဒီမှာဖော်ပြတာကတော့ အစစ်အမှန်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒါက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဆိုရင် ကာလုံအစည်းအဝေးမှာကတည်းက ကာလုံက ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် စစ်တပ်တွေက ရပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာဇစ်မြစ်မှာက တကယ်လို့များ ဗိုလ်သိန်းစိန် က အကြောင်းကြားရဲသားနဲ့ ကိုမင်းအောင်လှိုင် က မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါက ဗမာပြည်မှာ အခု ၂၀၁၀ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့  နဂိုပြဿနာဇစ်မြစ်တွေ ပြန်ပေါ်လာတာ ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုနပြောသလို သူဟာ နိုင်ငံတကာ ဖိအားကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် သူကနေ ဒီလို ဒါလေး ညွှန်ကြားတယ်ကိစ္စလောက်နဲ့ ဟိုကမလုပ်ဘူးဆိုရင် သူတို့နှစ်ဘက်စလုံးမှာ အရှက်ရစေတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ တဘက်ကလုပ်ခိုင်းတယ်၊ တဘက်က မလုပ်ဘူး။ အဲဒီ သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ တခုလုံး ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခြေအနေ၊ အချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မသိသေးပေမယ့်။ ကျနော်တို့ မေးလို့ရတဲ့ အချက်အလက်အရ ပြောမယ်ဆိုရင် ဒီအခြေအနေက အခြေအနေမှန် မဟုတ်သေးဘူးလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ အခြေအနေမှန် မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ ဆက်လက်ပြီး တိုက်နေအုံးမယ်ဆိုတာကို ပြောတာလား။ အခြေအနေမှန် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ ကာလုံ နဲ့ကြားမှာ ဆက်ဆံရေးဟာ အစဉ်အလာတရပ်အနေနဲ့ အခိုင်အမာ မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောကို ပြောတာလား။
ဦးအောင်ကျော်ဇော ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သဘောက အခုနပြောသလို အစိုးရဘက်မှာလည်း ကျနော်တို့ ကြားသိသလောက် နှစ်ပိုင်း ရှိပါတယ်။ တပိုင်းကလည်း တကယ်ကို မတိုက်ချင်တော့တဲ့လူ။ ဒါက အနည်းစု။ အများစုကတော့ တပ်က တိုက်နေတဲ့ကိစ္စကို ကြည့်နေကြတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆို အစိုးရဘက်မှာ တကယ်တော့ တိုင်းပြည်မှာ လောလောလတ်လတ်ဆိုရင် အာဏာသုံးရပ်လို ဖြစ်နေတယ်။ တပိုင်းက အစိုးရ Cabinet ၊ တပိုင်းက တပ်၊ တပိုင်းက လွှတ်တော်။ အဓိက အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တစုံတရာ စစ်ရပ်ချင်တဲ့ သဘောထားရှိမယ်။ တပ်က မရပ်တာကို စောစောက တွေ့ရတယ်။ စစ်ရပ်ဆဲတဲ့ကိစ္စမှာ ကျနော်ထင်တာတော့ ညီညီညွှတ်ညွှတ် မရှိပါဘူး။ မညီညွှတ်တဲ့သဘောက ရပ်ချင်တဲ့သဘောထားမျိုးကို သုံးခုလုံးမှာ မတွေ့ရဘူး။ အစိုးရပိုင်းကဆိုရင် သူဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနတွေမှာဆိုရင် တိုက်ပွဲသတင်းတွေ မဖော်ပြဘူး။ ဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်း ကေအိုင်အို ကို သောင်းကျန်းသူလို့ ရေးသားတယ်။ နောက် IDP ကိစ္စဆိုရင် ဖုံးကွယ်ထားတယ်။ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်း စစ်ပွဲကိစ္စ ရေးခွင့်မရှိဘူး။ ဒုတိယ လွှတ်တော်အပိုင်းမှာလည်း အခိုင်အမာ ဘယ်သူမှ ဆွေးနွေးကြတာ မတွေ့ရဘူး။ တပ်ကတော့ မပြောနဲ့တော့။ တပ်က ဦးစီးချုပ် နှစ်ယောက်ရဲ့  အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ တိုက်နေတဲ့ စစ်ပွဲအသစ်ဖြစ်ရဲ့ သားနဲ့ တပွဲပြီးတပွဲ ရှုံးနေတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တပ်အနေနဲ့၊ ဦးစီးချုပ်တွေအနေနဲ့ အထက်အရာရှိကြီးတွေအနေနဲ့ လုံးဝ ရပ်ဆဲချင်တဲ့သဘောထား မရှိပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးအောင်ကျော်ဇော သုံးသပ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု ဖွဲ့စည်းပုံအရ အာဏာခွဲဝေမှု ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိဘူးဆိုတာကို အဓိက တွေ့ရတယ်။ သူတို့တဖွဲ့ခြင်းရဲ့  ဆန္ဒကတမျိုး။ ဦးဌေးအောင်အနေနဲ့ အဲဒီအချက်ကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဦးဌေးအောင် ။ ။ အဲဒီအချက်ကတော့ အခုလက်ရှိ အောက်လွှတ်တော်ရဲ့  ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဦးသူရရွှေမန်း ကိုယ်တိုင်က ဒီအချက်ကို ဝန်ခံသွားတာ ရှိပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သူ့စကားအရ မဏ္ဍိုင်ကြီး (၃) ရပ်လို့ခေါ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် နဲ့ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်တွေကြားမှာ အခုအပြောင်းအလဲတွေပေါ်မှာ လက်မခံနိုင်သေးတာတွေ ရှိနေတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက်ကြား သဘောထားကွဲလွဲတာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုပြီး သူက ထုတ်ဖော်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားတာ ရှိပါတယ်။ နောက်တခုကလည်း လွှတ်တော်ထဲမှာ အောက်လွှတ်တော်နဲ့ အထက်လွှတ်တော်ကြားမှာ ဒီ ဥပဒေအပေါ်မှာ အငြင်းပွါးပြီးတော့ အပြန်အလှန်၊ အခြေအတင် ပြောကြဆိုကြတဲ့ သာဓကတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ အခုလက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့အနေနဲ့ အရင်တုန်းကတော့ စစ်တပ်ဆိုတဲ့ စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာ အမိန့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အထက်အောက် သွားနေရာကနေ အခု ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဘေးတိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ တယောက်နဲ့တယောက် အမိန့်မနာခံတာတွေ။ တယောက်နဲ့တယောက် အချိတ်အဆက်မမီတာတွေ ဒါတွေကလည်း ရှိနေသေးတဲ့ သာဓကတွေကို တွေ့ရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော်တခု မေးချင်တာက ဦးအောင်ကျော်ဇော … ကျနော်ကြားဘူးတာတခုရှိတယ်။ စစ်သားတွေက ပြောဘူးတယ် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားတာ ငါတို့ အလိုလားဆုံးပဲ။ သေစရာရှိရင် ငါတို့သေနေရတာ။ စစ်တပ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး အလိုလားဆုံးစကား။ မြန်မာစစ်တပ်က ဘာဖြစ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေး မလိုချင်တာလဲ။ နောက်တခုက သူတို့အတွက် ဒီ စစ်ပွဲကို တိုက်နေလို့ ဘာများအကျိုးရှိမလဲ။ အဲဒီ နှစ်ချက်ကို ရှင်းပြပေးပါ။
ဦးအောင်ကျော်ဇော ။ ။ ဗမာစစ်တပ်က ငြိမ်းချမ်းရေး အလိုချင်ဆုံးဆိုတဲ့ ပြဿနာကတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိက အောက်ခြေမှာ လူထုနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့လူတွေ။ တိုင်းတွေဒေသတွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒါက စစ်တပ်က စစ်မတိုက်ရဘူးဆိုရင် သူတို့အတွက် ကောင်းတာပေါ့။ လူထုအတွက် ရိုက်စားလို့ရတယ်။ ဖားရိုက်လို့ရတယ်။ တောင်းစားလို့ရတယ်။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလလို့ သဘောထားတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ စစ်မတိုက်ချင်တာ အမှန်ပဲ။ စစ်တိုက်ရင် သူတို့လည်း သေကြတယ်။ အခုလည်း လာတိုက်တဲ့ အောက်ခြေတပ်တွေမှာ စစ်တိုက်ချင်စိတ် မရှိဘူး။ ယနေ့ ကေအိုင်အေနဲ့ တိုက်တဲ့ပွဲတွေမှာ ဗမာစစ်တပ်က ချေမှုန်းရေးပွဲ တပွဲမှာ မရသေးပါဘူး။ မထိုးနိုင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု ဆက်ပြောစေချင်တာက ဘာများအကျိုးရှိသလဲ။ ကေအိုင်အို နဲ့ တိုက်ပွဲကို ဘာဖြစ်လို့ စစ်တပ်က ဆက်တိုက်ချင်ကြသလဲ။ သူတို့ ဘာအကျိုးရှိသလဲ။ သမ္မတအမိန့်ကို ထောလောကန့်လန့် လုပ်ပြတဲ့ဆိုရုံပဲလား။
ဦးအောင်ကျော်ဇော ။ ။ အဲဒီ အခြေခံပေါ်မှာ ပြောမယ်ဆိုရင် ဗမာစစ်တပ်က ဘာဖြစ်လို့ ဆက်တိုက်နေသလဲဆိုရင် အောက်က မတိုက်ချင်ဘူး။ အခုနပြောတဲ့ ဦးစီးချုပ် နှစ်ယောက်အပါ။ နောက် အခုမှ အာဏာရထားတဲ့ သူတို့က လက်စွမ်းပြချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်စွမ်းပြတာ လက်စွမ်းပြမရောက်ဘဲနဲ့ တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ အရှုံးနဲ့တိုးပြီး ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့က မျက်နှာတခုရအောင် လုပ်ချင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမလုပ်ခင်မှာ။ ဆိုပါတော့ ကေအိုင်အိုရဲ့  တပ်မဟာ (၃) ဧရီယာတခုခုကို သူတို့မှာ ပြောလို့ရအောင်ကောင်းတဲ့ တခုခုလုပ်ချင်တယ်။ တပ်မဟာတခုလုံးကို ရလိုက်ပြီ။ တပ်မဟာ (၃) ကို ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ အဲဒါမျိုးတခုခု လုပ်ပြီးမှ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး လုပ်ချင်တဲ့သဘောမျိုး မြင်နေရတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ရှင်းပါတယ်။ ဦးဌေးအောင် သဘောထား ပြောပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီ စစ်ကို ဆက်တိုက်ချင်ရသလဲ။ စစ်တပ်အတွက် ဘာအကျိုးရှိမလဲ။
ဦးဌေးအောင် ။ ။ စစ်တပ်မှာ အကြီးအကဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့၊ အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့မှူးတို့၊ စစ်တိုင်းမှူးတို့ကတော့ စစ်ကို တိုက်ချင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့က ခန့်အပ်ထားတာလည်း မကြာသေးဘူး။ လူသစ်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့  အစွမ်းအစတွေကိုလည်း ပြချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့က စစ်တိုက်မှာသာလျှင် သူတို့ရဲ့  သြဇာအာဏာကို သူတို့က တည်ဆောက်လို့ရတယ်။ အဲဒီအခါကြတော့ အပေါ်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ စစ်တိုက်တာကို သူတို့အနေနဲ့ လိုလားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လက်တွေ့ အသေအကြေခံပြီး တိုက်နေရတဲ့ အောက်ခြေတိုက်မှူးတပ်သားတွေကတော့ ဒီစစ်ကို သူတို့တိုက်လာခဲ့ကြတာလည်း ကျနော်တို့ ဗမာပြည်စစ်သမိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆယ်စုနှစ် (၅) ခုကျော်လောက် ရှိလာခဲ့ပြီ။ အဲဒီတော့ အောက်ခြေကတော့ စစ်ကို တကယ် ရွံမုန်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်နေမှာ အမှန်ပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု ကျနော်တို့က အရင်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို မေးချင်ပါတယ်။ တရုတ်က သူတို့နယ်စပ်မှာဖြစ်နေတာကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတာ ရေကာတာကိစ္စမှာ ကချင်က ကန့်ကွက်ခဲ့လို့ ကချင်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပေဆိုပြီး မျက်ကွယ်ပြုနေသလား။ ဘာဖြစ်လို့ တရုတ်က ဘာမှမပြောတာလဲ။ ဒုက္ခသည်တွေ သူတို့ဘက်ကို ဝင်သင့်သလောက် ဝင်နေတယ်။ ဦးအောင်ကျော်ဇော သဘောထားကို ပြောပါ။
ဦးအောင်ကျော်ဇော ။ ။ ဒါက နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တခုက ဦးကျော်ဇံသာ ပြောတဲ့ကိစ္စလည်း ပါပါတယ်။ မြစ်ဆုံကိစ္စက လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်ကတည်းက ကေအိုင်အေ က မပြတ်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုသိအောင်လည်း ဝါဒဖြန့်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်တခုလုံးက မလိုလားဘူး။ အတိုက်အခံဖြစ်နေတာကို သူတို့ အစောကြီး သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကချင်နဲ့ ပတ်သက်လို့၊ ကေအိုင်အေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့မှာ သဘောထားတချို့  ရှိပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ကေအိုင်အေမှာ UNFC ဖွဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုး။ ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင်တချို့  အမေရိကကို သွားတဲ့ကိစ္စမျိုး west ကိုသွားတဲ့ကိစ္စမျိုး တရုတ်က အတော်လေး အစားမကြေပါဘူး။ လိုတာရှိရင်ပြောပါဆိုပြီး ပြောတဲ့ကြားက သွားတယ်ဆိုတဲ့ လေသံမျိုးတောင် ထွက်လာတယ်။ တကယ်တော့ လိုတာရှိတော့လည်း မကူပါဘူး။ အဲဒီတော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့  အခြေအနေဟာ လောလောလတ်လတ်ကတော့ on the border ပါ။ ကေအိုင်အို ကို ကူမလား။ ဗမာအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး ကေအိုင်အို ကို ချေမှုန်းမလား။ အခုထိတော့ ကေအိုင်အို ကို လုံးဝချေမှုန်းလို့ မရဘူး။ ဗမာအစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီး ချေမှုန်းရင်လည်း သူတို့ဒေသမှာရှိတဲ့ ကချင်တွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်မယ်။ ဒေသထဲမှာလည်း တရုတ်ပြည်ထဲက ကချင်လူမျိုးတွေကလည်း ကေအိုင်အေရဲ့  လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ ပြဿနဖြစ်မယ်။ လောလောဆယ်တော့ လက်ပိုက်ကြည့်နေပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးဌေးအောင် … အခု ကုလသမဂ္ဂက ကိုယ်စားလှယ်တချို့ ကို လိုင်ဇားကို ဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီကနေပဲ ရောက်နေပြီးဆိုတာကို ကျနော်တို့သတင်းထောက်တွေက သတင်းပို့ပါတယ်။ ဆိုတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတော့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကို လာကြည့်ခွင့်ပြုတဲ့သဘောမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီဟာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရှေ့  အလားအလာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲလို့ ထင်ပါသလဲ။
ဦးဌေးအောင် ။ ။ တခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် က သူ့အနေနဲ့ အရင် စစ်အစိုးရတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားကြောင်း။ သူတို့မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိကြောင်း။ နိုင်ငံတကာနဲ့လည်း သူတို့က နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံလိုကြောင်း။ ဒါတွေကို ပြသဖို့အတွက် အခုလို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို လာခွင့်ပြုကြောင်းလို့ ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ ဒီလို လာခွင့်ပြခြင်းအားဖြင့် ဆက်လက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားတဲ့လူနဲ့ စစ်ဆက်တိုက်ချင်တဲ့ လူကြားမှာ ဘယ်ဘက်က အင်အားသာပြီးတော့ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မလဲလို့ ထင်ပါသလဲ။ နောက်ဆုံး comment ပေးပါ။
ဦးဌေးအောင် ။ ။ တခုရှိပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအရတော့ တပ်မတော်ကို သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အပြည့်အဝပေးထားတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့အနေနဲ့ တရားဝင် အာဏာသိမ်းပိုင်ခွင့်ကိုတောင် ပေးထားတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးမှာတော့ စစ်တပ်ရဲ့  သဘောတူညီချက် မရရင်၊ သမ္မတကလည်း ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး အာဏာလည်းရှိမယ့် အနေအထားမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးအောင်ကျော်ဇော နောက်ဆုံးမှတ်ချက် … ကချင်၊ ကေအိုင်အိုနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာ ဘယ်လိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ် ထင်ပါသလဲ။
ဦးအောင်ကျော်ဇော ။ ။ ရေရှည်လာတဲ့အခါမှာ ကျနော်အထင်တော့ ဗမာအစိုးရရဲ့  အဓိကတပ်က ပြောင်းလဲဖို့အခြေအနေ၊ သူ့ဘာသာသူ့သဘောထားနဲ့ ဖြစ်လာမှသာလျှင် ဒီတိုက်ပွဲက ရပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကချင်ဘက်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဆင်သင့်ပါ။ သင့်တော်တဲ့ နိုင်ငံရေး solution တခု ခိုင်ခိုင်မာမာပြောပြီး ရပ်မယ်ဆိုရင် ရပ်လို့ရပါတယ်။
Posted by Admin Monday, December 12, 20110comments
တပ်မဟာ ၃ အခြေအနေ နောက်ဆုံးရသတင်းများ
သတင်း ဇော်ရှန် (wunpawng ) 12 12 2011 ..........
ဒီဇင်ဘာ (၉)ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် စိန်လုံကဘာ နှင့် မိုင်ဂျာယန်ကြား မုဘွမ် နှင့် ခိုင်ဘန်ယန် တို့တွင် ကေအိုင်အေအစိုးရ တပ်မဟာ (၃) လက်အောက် မှ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာစစ်အစိုးရစစ်တပ် တို့တစ်နေကုန် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြိး နောက်ဆုံး သတင်းအရ တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေကိုသိန်းစိန် စစ်တပ် ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြိလို့ဒိညနေ သတင်းပေးပို့ လာပါတယ် ။
ရှေတန်းရောက် မြန်မာစစ်သားများ သတင်းပေးပို့ နေစဉ် ။
မှတ်ချက် ။ ။ ပြည်တွင်းစစ်မှာ သုံးခွင့်မရှိသည့် လက်နက် ကြီးများ ။ စာတုလက်နက်များ လူအင်အား အနည်းဆုံး ၁ ထောင် ခန့် နှင့် ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ အတွက် ဆုတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
'' အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် အကျများလာတော့ ကချင်ရွာသားများကို စစ်တပ်ဝတ်စုံ ပေးပြိး ရှေတန်းမှာ အသုံးပြုလာခြင်း ၊ မိန်းကလေးများကို ရှေတန်း စစ်တပ်ထဲ ဖမ်းဆီးပြိး အ၀တ်မပါ နေခိုင်းပြိး .............. ထမင်းဟင်းများလုပ်ပေးပြင်ဆင်ပေးရနေပြိး ၊ ဖမ်းထားမူ ၊ ကချင် ရှမ်းရွာများ ကို မီးရူး ၊ဖြစ်လာသည့်အတွက် ၊ စသည့် လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မူများစွာ ဖြစ်နေသည့်အတွက် လူထုအတွက် နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ခြင်း တာဖြစ်ပါသည် '' ။
ကေအိုင်အေ ထိခိုက်မူ အနည်းအကျဉ်း ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ် ။ အသိအကြ မသိရှိ ရသေးပါ ။
တွေ့ သည့်ကချင် ရှမ်း ၊ တရုတ် ၊ အမျိုးသမီးများကို မဒိန်းကျင့် မူများစွားဖြစ်နေပါတယ် ။
တပ်မဟာ ၃ ၊ စိန်လုံကဘာမှ မိုဂျာယန်ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရ ဗမာစစ်တပ်နှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုက်ပွဲသတင်း အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိပါသည်။
အသုံးမ၀င်သည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ညွှန်ကြားစာ
ဇော်ရှန် (wunpawng ) 12 12 2011 ..........
ကေအိုင်အေ ကို အစိုးရတပ် ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ဟာတွေ ရပ်ဆိုင်းထားရန်အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံ ၁၀ ရက်နေ့က ညွန်ကြားစာ ပေးပိုလိုက်တယ်သိရပါတယ် ။
ထိုးစစ်ရပ်ရန် သမ္မတ ညွန်ထားပေမဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ ၄ နယ်မြေ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း KIA တပ်ရင်း ၉ နယ်မြေ အတွင်းဘက် ဦးတည်ပြိး စတင် ထိုးစစ်ဆင်နေပြိလို့ ကေအိုင်အေ ကပြောပါတယ် ။
ယူမန်နေ မင်းအောင်လှိုင်ထံ ညွန်ကြားစာ ပိုသည့် ၁၀ ရက်နေ့ မှာဘဲ လက်နက်အပြည့် ပါလာတဲ့ လားတွေ နဲ့ စစ်အင်အား ၂၀၀ ကျော် ခန့်စတင်ပြိး KIA တပ်ရင်း ၉ နယ်မြေ ရောက်ရှိပြိလို့ ပြောပါတယ် ။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ညွှန်ကြားပေမဲ့ ထိုးစစ်များရှိ
ကေအိုင်အေ ကတော့ တရားဝင် စာမရောက်ရှိလာသည့် အတွက် အစိုးရတပ် များ နယ်မြေထဲမှာ ဝင်ရောက် ပြိး ထိုးစစ်တွေ ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက် လုပ်သင့်တာ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ကေအိုင်အေ ကပြောပါတယ် ။
ထိုးစစ်ရပ်ဖို့ ညွန်ကြားစာပေးပို့ ပြိနောက် တနင်္လာနေ့ မှာ
ကချင် စစ်ပြေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပထမဆုံး အကြိမ်
ငွေကျပ် သိန်း ၇၀၀ ၊ အသုံးဆောင်များ ၊
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ မြို့တော်ခန်းမ မှာ နံနက် ၈ နာရီကနေ စပြိး ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ပေးအပ်ပွဲမှာ လူအင်အား စုစုပေါင်း ၆၅၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့တယ်လိုသိရပါတယ် ။
အစိုးရတပ်ကတော့ ရှေတန်း မှာ မကဘဲးနောက်တန်းမှာ ရှိတဲ့ သိန်းစိန်စစ်သားများ ကတော့ တရွာဝင် တရွာထွတ် ကချင်လူထု ၊ ရှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်သည့်ဒေသ မှာ ၊ လုယက်မူ ၊ ရွာများကို မီးရူး မူများ ၊ အမျိုးသမီးများကို မဒိန်းကျင့်သတ်ဖြတ်မူများ ၊ လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မူများ
တိုက်ပွဲ များ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
wunpawng news group ..............................
Burmese troops kill unarmed Kachin civilian
Kachin To day Magazine
Kachin Today, Monthly e-Magazine Download PDF Files (Archived)
Announcements (9) cartoon (1) contact (1) Document (3) Education (1) English (1) Event (1) Hti Hpa (1) interview (3) invitation (3) laikangau (41) MAHKAWN (2) Mail (1) masa (1) Mungga (2) new (2) news (148) ning mu (2) photo (6) refugee (2) Shiga (2) special (2) Sumla (1) video (32) web (2)
Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi
IrraWaddy Not For Sale
မွဈဆုံ ရကောတာ ဆကျ မဆောကျဖို့
ကျုပ်တို့တော့ ဒီကိစ္စတွေကို ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်ဘူး
Read More Click on photo
San Francisco Kachin Community held an Awareness a...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ကို တဦးတည်းကူညီမည့်ေ...
HPYEN YEN TSIN YAM NI A MATU USA DU HKANG MYU SHA ...
"Facebook" အကြောင်း သိကောင်းစရာ....
25000 Kachin Flee to KIO controlled area
KIA General Gunhtang Gam Shawng Briefing Till to...
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူမှုဆိုင်ရာ အခမဲ့အွန်လိုင်း Website မ...
JLH (Texas, USA ) kawn Hkang (CHIN) ningbaw ni hte...
ဟီလာရီရဲ့ ဂျက်လေယာဉ် ဘယ်လို အစွမ်းထက်သလဲ
Htet dat na
Hti Hpa (1)
ning mu (2)
Kaiji Naw Naw
Copyright 2009 : KTO-USA: 2011 Monezine Blogger Template Designed By Jinsona Design | Blogger XML Coded By CahayaBiru.com